Semalt: Ny fikojakojana tsara indrindra amin'ny Internet
Content scraping or web scrap ing is the process of using rindrambaiko manokana na fampihetseham-pandrosoana amin'ny Internet mba hanangona votoaty avy amin'ny tranonkala. Fandefasana antso amin'ny webmasters sy mpandrindra izay te-hahazo haingana haingana amin'ny fidirana amin'ny vaovao hita any amin'ny tranonkala hafa.
Azo atao amin'ny fomba ratsy ny fampihenana ny tranokala amin'ny fampiasana mailaka marketing, spamming , ary robocalls - curso de fotografia digital nikon p520 camera. Noho izany, ny ankamaroan'ny webmasters dia maniry ny hiala amin'izany. Na dia izany aza, raha toa ka mahavita manaparitaka tranonkala samihafa ny tontolon'ny tranonkala samihafa dia mety ho fomba mahery vaika.
Ahoana no ahafahana manasitrana
Andeha hodinihintsika ny lisitry ny Internet amin'ny hotely rehetra. Raha te-hanambatra ny hotely tsirairay ny mpizaha tranonkala iray, dia tsy maintsy ampidiriny ao anaty tahirin-tsoratra izy ireo. Io dingana io matetika dia mandany ora maromaro mba hahazoana antoka fa ny hotely tsirairay ao amin'ny firenena dia tafiditra ao. Amin'ny tranokala , io webmasters io ihany no afaka mametraka karoka fikarohana ary manangona izany avy hatrany avy amin'ny tranonkala samihafa.
Manangana na mividy tranonkala?
Raha te-hanamboatra fitaovana enti-tranonkala ianao, dia afaka manangana iray avy amin'ny tabilao na mampiasa iray efa misy. Ny ankamaroan'ny mpandrindra dia tsy manana ny fahaiza-manao, fahalalana, fitaovana na loharanom-pitaovana ilaina hananganana fitaovana maoderina . Ny vaovao tsara dia misy am-polony am-polony nopetahana ety anaty aterineto.
Ireo fomba fiasa sy teknika ampiasaina amin'ny fampisehoana tranonkala
Raha toa ianao ka hanamboatra ny vatanao dia mila mahatakatra ny teknolojia tafiditra amin'ny fanangonana angona. Ny ankamaroan'ny mpanadio dia novolavolaina tamin'ny HTML, tamin'ny fampiasana ny DOM (manasongadina ny modelin'ny rakitra) mba hanivanana amin'ny alalan'ny HTML mba handraisany fotsiny ny vaovao mahafinaritra. Tsy maintsy mamantatra ny divs, ny votoatiny, ny kilasy, ary ny lisitra misy ny angon-drakitra tianao hampiarahina sy hampiditra azy ireo ao anatinao.